छोरा न’जन्मिए पनि के भो ? बाबुको कि’रिया गर्दै १७ वर्षिय छोरी – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/छोरा न’जन्मिए पनि के भो ? बाबुको कि’रिया गर्दै १७ वर्षिय छोरी
छोरा न’जन्मिए पनि के भो ? बाबुको कि’रिया गर्दै १७ वर्षिय छोरी
चितवन खै’रहनी नगरपालिका ११ का डिलवहादुर गुरुङ ७ वर्षको भारत वसाई पछि घर फर्किए । रोजगारीको सिलसिलाका लागि भारतमा रहेका उनि चैत ८ गते घर आएका थिए । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनी अस्पताल भर्ना भए ।
नि’मोनिया रहेका उनको चैत १० गते राती उपचारका क्रममा नि’धन भयो । डिलवहादुरका छोराहरु छैनन् । दुई श्रीमतीबाट ज’न्मिएका तीन छोरी छन् । जेठी श्रीमतीकी जेठी छोरीको विहे भईसकेको छ । कान्छी १७ वर्षकी छिन् । कान्छी श्रीमतीबाट ज’न्मिएकी छोरी ७ वर्षकी छिन् ।
छोरा नभएकै कारण डिलवहादुरको मृ’त्यु सं’स्कार उनकी १७ वर्षिया छोरी अनिशाले गरेकी छिन् ।आफैले दा’गवत्ती दिएकी अनिशाले लामा प’रपम्परा अनुसार १३ दिनको का’जकि’रिया गरेकी छिन् । १३ दिनको कार्य उनले शनिवार आज पुरा गरेकी छिन् ।
एउटै को’खबाट ज’न्मिएका छोराछोरी समान हुन् अनिशाले भनिन् – काजकिरियामा पनि समानता ल्याउन पुरानो परम्परा तो’ड्न आवश्यक छ । कतिपय ठाउँमा छोरी कि’रिया वस्दा समाजले फरक दृष्टिकोणले हेर्ने गर्छ । तर आफ्नी नातिनी बुबाको कि’रिया वस्दा कुनै वि’रोध नभएको उल्टै समाजले राम्रो मा’नेको हजुरवुवा कृष्ण गुरुङले वताए ।
खैरहनी नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य गोमादेवी भुजेलले पनि आफ्नी आमाको कि’रिया आफैले गरेको वताउँछिन् । त्यो वेला छोरीले कि’रिया गर्न हुन्न भनेका थिए भुजेलले भनिन् – एउटै कोखबाट ज’न्मिएका छोराछोरी समान हुन्, भे’दभाव गर्न हुन्न भन्ने सन्देश दिन कि’रिया गरियो ।
मृ’त्यु पछि छोराले मात्र सं’स्कार गर्नु पर्छ भन्ने परम्परालाई तो’ड्नु पर्ने कार्यपालिका सदस्य भुजेलको भनाई छ । छोरा छोरी ज’न्माउँदा समान पीडा हुन्छ उनले भनिन् –का’जकिरियामा पनि समानता ल्याउन जरुरी छ ,छेकबार हुनु हुदैन । यसअघि खैरहनी १० की महिला अधिकारकर्मी सुकमाया भुजलले पनि आफ्नी आमाको कि’रिया गरेर छोराले मात्रै सं’स्कार गर्नु पर्छ भन्ने मान्यातालाई तो’डेकी थिईन्
मृ’त्यु पछि छोराले मात्र सं’स्कार गर्नु पर्छ भन्ने परम्परालाई तो’ड्नु पर्ने कार्यपालिका सदस्य भुजेलको भनाई छ । छोरा छोरी ज’न्माउँदा समान पीडा हुन्छ उनले भनिन् –का’जकिरियामा पनि समानता ल्याउन जरुरी छ ,छेकबार हुनु हुदैन । यसअघि खैरहनी १० की महिला अधिकारकर्मी सुकमाया भुजलले पनि आफ्नी आमाको कि’रिया गरेर छोराले मात्रै सं’स्कार गर्नु पर्छ भन्ने मान्यातालाई तो’डेकी थिईन्l
हेलिकेप्टरलाई कोभिडले त सतायो-सतायो अब फेरी तुवाँलोले सतायो, चार दिनदेखि काठमाडौंमा उडान ठप्प
दैनिक पाँच लाख अण्डा उत्पादन हुने कुखुरा फार्म खुल्दै, दुई अर्ब लगानीमा बायोग्यास र जैविक मल पनि
एक ट्रक आगलागी
एकै परिवारका आठसहित १४ जनामा देखियो कोरोना